Monaco princess-to-be swims for charity in SAfrica - The San Diego Union-Tribune
South African born Charlene Wittstock, reacts during a visit to a local school in Pietermaritzburg, South Africa, Friday, Feb. 11, 2011. The future Princess of Monaco is a former Olympic swimmer, but she says a weekend charity swim she will be doing in South Africa, her homeland, will be a challenge. (AP Photo/Schalk van Zuydam) (/ AP)
South African born Charlene Wittstock, reacts during a visit to a local school in Pietermaritzburg, South Africa, Friday, Feb. 11, 2011. The future Princess of Monaco is a former Olympic swimmer, but she says a weekend charity swim she will be doing in South Africa, her homeland, will be a challenge. (AP Photo/Schalk van Zuydam)) (/ AP)
South African born Charlene Wittstock, walks amongst pupils during a visit to a local school in Pietermaritzburg, South Africa, Friday, Feb. 11, 2011. The future Princess of Monaco is a former Olympic swimmer, but she says a weekend charity swim she will be doing in South Africa, her homeland, will be a challenge. (AP Photo/Schalk van Zuydam) (/ AP)
South African born Charlene Wittstock, watches during a visit to a local school in Pietermaritzburg, South Africa, Friday, Feb. 11, 2011. The future Princess of Monaco is a former Olympic swimmer, but she says a weekend charity swim she will be doing in South Africa, her homeland, will be a challenge. (AP Photo/Schalk van Zuydam)) (/ AP)
South African born Charlene Wittstock, listens to children during a visit to a local school in Pietermaritzburg, South Africa, Friday, Feb. 11, 2011. The future Princess of Monaco is a former Olympic swimmer, but she says a weekend charity swim she will be doing in South Africa, her homeland, will be a challenge. (AP Photo/Schalk van Zuydam)) (/ AP)
South African born Charlene Wittstock, centre, walks past schoolchildren during a visit to a local school in Pietermaritzburg, South Africa, Friday, Feb. 11, 2011. The future Princess of Monaco is a former Olympic swimmer, but she says a weekend charity swim she will be doing in South Africa, her homeland, will be a challenge. (AP Photo/Schalk van Zuydam)) (/ AP)
South African born Charlene Wittstock, cuts a ribbon to open a pool during a visit to a local school in Pietermaritzburg, South Africa, Friday, Feb. 11, 2011. The future Princess of Monaco is a former Olympic swimmer, but she says a weekend charity swim she will be doing in South Africa, her homeland, will be a challenge. (AP Photo/Schalk van Zuydam)) (/ AP)
The South African-born future princess of Monaco is a former Olympic swimmer, but she says a weekend swim in her homeland to raise money for the Special Olympics won't be easy.